Home > Products > Hardware Tools > Mamaritra ny fitaovana > Vernier Caliper
Mpanao fahatelo amin'ny bika andehilahy singiolary ny bika ho avy mialoha (anteriora) ny endriky ny atao Ny tadin-tsoavaly dia mety ho tsotra toy ny kômpassa miaraka amin'ny tara-maso anatiny na ivelany. Ny toro-hevitra momba ny tadin-davenona dia novaina mba hizaràna ireo hevi-dàlana nodorana, dia nesorina avy eo ny tsipika ary ny elanelana dia novakianao tamin'ny fandrefesana ny tadin-tsipika miaraka amin'ny fitaovana fandrefesana, toy ny mpitondra. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny sehatra maro toy ny metaly, fitaovana maoderina, fitaovam-piadiana, famokarana, kitapo hazo, hazo fisaka ary fanafody.
Product Introduction of the Vernier Caliper
Ny fiovana amin'ny tsipika nentim-paharazana kokoa dia ny fampidirana ny vernier maitso; Izany dia ahafahana mivantana mivezivezy mivantana. Ny vernier calers dia afaka mandrefy dimampolo ao anatiny (ampiasàna ny valifaty ambony indrindra eo amin'ny sary eo ankavanana), ny endriny ivelany amin'ny fampiasana ny valanorano eto ambany, ary miankina amin'ny mpanamboatra, ny fandrefesana lalina amin'ny fampiasana ny andrana izay mifatotra amin'ny loha amboara sy mamita ny foiben'ny vatana. Ity teboka ity dia somary miloko ary afaka miditra ao anaty lavaka lalina izay mety ho sarotra ho an'ny fitaovana maoderina hafa.
Ny mizana manjavozavo dia mety hahitana ny môtera sy metimety eo amin'ny faritra ambony sy ambany. Ny vernier brouillage izay matetika ampiasaina amin'ny indostria dia manome fahamendrehana amin'ny zato amin'ny iray milimetatra (10 micrometres), na milanja iray metatra.
Ny fitaovana marim-pototra ampiasain'ny tanjona iray ihany dia ny micrometer.
Product Parameter an'ny Vernier Caliper
Manamora ny fandehanana
0.01mm (.0005â €)
Fahadisoana azo zahana
Â ± 0.03mm
Araka ny fitakian'ny mpanjifa
Ny fandrafetana manokana dia ankasitrahana. Fanontam-pirinty azo alaina
Kitapo plastika na mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa
Toy ny mahazatra, manodidina ny 25-35 andro
30% aloany mialoha, 70% mandanjalanja mialoha ny sambo
Karazan-tsakafo sy fampiharana ny Vernier Caliper
LCD Digital Vernier taper
1. Tetezana ABS / HOLD / TOL
2. mm / inch Switch
3. Fikirana zero
4. Mandeha amin'ny batterie 1.5V
5. Temperature: 0 C ~ +40 C
6. Toby fandrefesana: -20 C ~ +70 C
Rafitra rafitra: 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 misy
Fampiharana: Ampiasaina amin'ny sehatra maro toy ny milina fanaovana metaly, fitaovana maoderina, fiaramanidina, famokarana, kitapo hazo, hazo fisaka ary fanafody.
Taridalana momba ny Vernier Caliper
1. boaty plastika
2. Kitapo hoditra fanina
3. Vata hazo
4. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Fandefasana: fitaterana an-dranomasina sy fitaterana an-dalamby na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.